Darpan Nepal – बिहे पछि किन बढ्छ महिलाको हिपको आकार ? यस्ताे अचम्मको छ कारण !
बिहे पछि किन बढ्छ महिलाको हिपको आकार ? यस्ताे अचम्मको छ कारण !
बिहे पछि एउटा नयाँ जिन्दगी सुरु हुन्छ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन आउँछ । पुरै जिन्दगी बदलिन्छ र यो समायोजन गर्न अलि समय पनि लाग्छ । साथै उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । आखिर बिहेपछी किन यस्तो हुन्छ त ? उनीहरुको नितम्ब किन फुल्छ ?
Previous Postतपाईलाई थाहाँ छ, नेवार महिलाहरुले किन लगाउँदैनन् फुली? यस्तो छ कारण Next Postभाग्य कसले देखेको हुन्छ र कतै तपाईंको भाग्यमा पनि राजयोग पो छ कि?? जान्नुहोस राजयोग हुनेले गर्नै पर्ने कुराहरु